Vaovao - Ahoana no haharetan'ny fantsom-piramirana lava kokoa?
Raha ny marina, ny vokatra fanafanana herinaratra tsirairay avy dia manana ny androm-piainany. Vitsy ny vokatra fanamafisana herinaratra afaka mahatratra 10 taona mahery. Na izany aza, raha ampiasaina sy voatazona tsara ny fantsom-pandrefesana dia maharitra kokoa noho ny mahazatra ny fantsom-panazavana. Avelao i Xiao Zhou hampahafantatra azy anao. , Ahoana ny fomba hahatonga ny fantsom-pahazavana mamiratra haharitra kokoa.
Tsy azo atao ny mampihoatra ny fampiasana fantsom-pahazavana mandritra ny fotoana maharitra. Ny fantsom-pamirapiratra tsirairay dia misy fetrany ampiasaina. Raha mihoatra ny elanelam-potoana io dia tsy haharitra izy io.
Rehefa 400 degre ny hafanan'ny lafaoro dia tadidio ny tsy hampangatsiaka haingana;
Aza mikasika ny fantsom-pamirapiratra rehefa mamoaka sy mampidina entana.
Rehefa miasa ny lafaoro fantsakana mamirapiratra dia tandremo foana raha ara-dalàna ny jiro fifamoivoizana eo amin'ny tontonana fanaraha-maso satria mila atakalo mandritra ny fotoana maharitra mandritra ny fotoana maharitra ny jiro mandritra ny fitehirizana ny hafanana, mba tsy handoroana ilay fantsona mamirapiratra noho ny ny tsy fahombiazan'ny switch switch.
Vao haingana, ny ekipanay dia nahomby tamin'ny famolavolana TANKII APM. Izy io dia metallurgical mandroso, nanamafisana ny fanaparitahana, firavaka feCrAl ferrite izay ampiasaina amin'ny mari-pana fantsona hatramin'ny 1250 ° C (2280 ° F).
TANKII APM fantsona manana fitoniana endrika tsara amin'ny mari-pana ambony. TANKII APM dia mamorona oksida ambonin-tany tsara indrindra, izay manome fiarovana tsara amin'ny ankamaroan'ny tontolon'ny lafaoro, izany hoe ny Oxydising, ny solifora ary ny gazy karbonika, ary koa ny fametrahana karbôna, lavenona, sns. tokana ny firaka.
Fampiharana mahazatra ho an'ny TANKII APM dia fantsom-pamirapiratana ao anaty lafaoro mandeha amin'ny herinaratra na gazy toy ny lafaoro maharitra maharitra, lafaoro famonoana tombo-kase, fitazonana lafaoro ary fatana fandrarahana ao amin'ny aliminioma, zinc, indostria firaka, fantsom-piarovana thermocouple, muffle amin'ny lafaoro ho an'ny rafi-pitabatabana.
Afaka manome APM amin'ny endrika tariby sy fantsona izahay. Tongasoa eto amin'ny baiko na ny fanadihadiana.
Open Coil Heater, Bayonet Heating Heating, Nickel Wire, Bayonet Heater, Wire fanoherana, Ireo singa fanafanana,